घट्दै कोरोना संक्रमण - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on February 21, 2022 by Basanta Pariyar
काठमाडौं : कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने संख्या दैनिक घट्दो छ। अस्पतालको शय्यामा न्यून संख्यामा संक्रमित उपचाररत छन्। मुलुकभरका अस्पताल (संस्थागत आइसोलेसन) मा ४ सय ९० जना संक्रमित उपचाररत छन्। जसमध्ये १४ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्राका अनुसार १ सय ३६ जना छन्। पछिल्लो दुई सातामा संक्रमितको संख्या अत्यधिक घटेको प्रवक्ता मिश्रा बताउँछिन्। गत माघ २४ मा १ हजार ५ सय ७० जनामा संक्रमण देखिएकोमा दुई सातापछि फागुन ८ मा आइपुग्दा २ सय ६२ मा झरेको छ। माघ २४ मा ११ हजार ३ सय ६५ जनाको परीक्षण गरिएको थियो । आइतबार ९ हजार ८ सय १५ जनाको परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
शय्या खाली हुँदै
कोरोना संक्रमणको तेस्रोे लहर मत्थर हुँदै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा संक्रमितका लागि छुट्ट्याइएका अस्पतालका अधिकांश शय्या रित्ता हुँदै छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा तीन जना मात्र उपचाररत छन्। अस्पतालका डा. विमल शर्मा चालिसे भन्छन्, ‘संक्रमित हुने र उपचारका लागि पुग्ने दर ह्वात्तै घट्यो।’
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ७ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका डा. सुन्दरप्रसाद हैजुका अनुसार अक्सिजन चाहिने संक्रमित दुई जना मात्र छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरमा संक्रमण दर उच्च हुँदा १ सय २९ जनासम्म भर्ना भए। ‘अहिले त संक्रमितको संख्या घटेको छ। संक्रमितका लागि छुट्ट्याइएका शय्याहरू खाली छन्,’ डा. हैजुले भने।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले १९ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले भने, ‘कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर छिट्टै मत्थर भयो। शय्याहरू पनि खाली भएका छन्।’ संक्रमण पुष्टि हुने दर घटेको छ।
त्यस्तै अधिकांश होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। जटिल अवस्था नभई भर्ना नभएका कारण पनि अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम घट्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा आइतबार ९३ जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौंमा ८० र ललितपुरमा १२ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। भक्तपुरमा एक जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रा बताउँछिन्।
संक्रमणदर ३ प्रतिशतमा झर्‍‍यो
मुलुकभर ९ हजार ८ सय १५ जनाको पीसीआर गर्दा आइतबार २ सय ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार १ हजार ३ सय ३८ जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। प्रवक्ता डा. मिश्राका अनुसार, अहिले औसत संक्रमणदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत छ।
तीन सातायता संक्रमण दर घट्ने क्रममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार, पहिलो र दोस्रोभन्दा तेस्रो लहर छिट्टै मत्थर हुँदै गएको छ। ‘ओमिक्रोन भेरियन्ट चाँडै फैलियो। र, यसअघिका भेरियन्टभन्दा छिट्टै नियन्त्रण उन्मुख भयो,’ डा. मरासिनीले भने, ‘पहिले जे जस्तो अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तै भयो।’
अहिले होम आइसोलेसन र संस्थागतमा १२ हजार २ सय ४४ जना उपचाररत छन्। होम आइसोलेसनमा ११ हजार ७ सय ५४ जना र संस्थागत आइसोलेसनमा ४ सय ९० जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
६० प्रतिशतलाई पूर्ण खोप
कुल जनसंख्याको ६० दशमलव ५ प्रतिशतले कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। कम्तीमा एक मात्रा लगाउनेको संख्या ७३ दशमलव १ प्रतिशत छ। १८ वर्षमाथिका ७६ दशमलव ९ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा लगाएका छन्।
आइतबार ३३ हजार २ सय ५४ जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘धेरै व्यक्तिहरू कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ। खोप नलगाएका व्यक्तिलाई अहिलेको भेरियन्ट वा सम्भावित नयाँ भेरियन्टको संक्रमण हुन सक्छ। यसतर्फ सतर्क हुनुपर्छ’, डा. मिश्राले भनिन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।